Cawinaadaha kale ee qoysaska la siiyo - InfoFinland
Nolosha Finland > Qoyska > Kaalmada dhaqaale ee qoyska > Cawinaadaha kale ee qoysaska la siiyo
Qoysasku waxay kaalmooyin kala duduwan u heli karaan nolosha. Helitaanka kaalmooyin badan waxaa ku xiran inaad ku jirto Ammaanka bulshada Finnishka ama aad Guri degmo ku leedahay Finland.
Qoyska uusan daklhigoodu ku filnayn inay kirada guriga iska bixiyaan ama guriga ay leeyihiin kharashaadkiisa, waxay kelada ka dalban karaan lacagta guud ee kaalmada ijaarka.
Qofka ilmaha haya iyo ku jira hawlgab, wuxuu Kelada ka codsan karaa lacag u kordhiya hawlgabka oo la xirrirta caruuta. Kelada ayaa bixinaysa lacagta kororka hawlgabka ilaa inta ilmuhu uu ka gaarayo 16 sano.
Qoysku wuxuu dalban karaa lacagta nolol maalmeedka, haddii ay haysato xaalad dhibaato oo xagga dhaqaalaha ah, taasoo aysan si kale u maarayn karin. Lacagta nolol maalmeedka waxaa laga dalbadaa Kelada.
Haddii aad gurigaada ku xannaaneyso xubin qoyskaada kamid ah oo qaba cudur dabo-dheeraaday, naafo ama waayeel ah, degmadaada ayaa ku siin karta kaalmada xannaaneynta ehelka ( omaishoitotuki). Kaalmada xannaaneynta ehelka waxaad ka codsan kartaa xafiiska sooshalka ee degmadaada. Warar dheeraad ah ka aqri bogga InfoFinlandi Cawinaada dhaqaale iyo bogga Dadka da'da ah qeybta Marka aad ehel guriga ku xannaaneyso.
Bogga InfoFinlandi ee Caawimaadda masruufka waxaa lagu sheegayaa kaalmooyin uu heli karo mas'uulka cunugga la deggan haddii aysan waalidku isla deganayn. Caawimaadda masuufku waa lacag uu waalidka meel kale deggan uga qeybqaato kharashka ku baxa cunugga. Waalidka aan la deganayn cunugga wuxuu caawimaadda masruufka siinayaa waalidka uu cunuggu la deggan yahay.
Lacagta qofka ilmaha masuulka ka ah loogu kordhiyo lacagta nolosha caruurta awgoodFinnish | Iswidish | Ingiriis